Trump: Xaq baan uleeyahay in aan iscafiyo - BBC News Somali
Trump: Xaq baan uleeyahay in aan iscafiyo
5 Juunyo 2018
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaaa sheegay inuu xaq u leeyahay inuu naftiisa iska cafiyi baaritaanka la xiriira in Ruushka iyo isaga ay wado shaqayn dhexmartay, isaga oo wali ku adkeysanaya in uusan gelin wax khalad ah.
Trump ayaa hadda muujiyay aragtidii uu bishii Janaayo ee sanadkan soo jeediyay qareenkiisa, taa oo ahayd in madaxweynaha uu xaq u leeyahay in uu isaga iska cafiyo waxa loo haysta.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa Trump waxaa uu mar kale ku gacan seyray baaritaanada lagu hayo suurtagalnimada in kooxdii wadday ololihiisa ay xiriir wada shaqeyn la lahaayeen Ruushka ama xitaa uu caqabad ku noqday caddaaladda.
Khubarada dhanka sharciga ayaa ku kala qeybsan in sharciyan madaxweynaha uu awood u leeyahay in uu iscafiyo.
Dacwad ooge khaas ah ayaa baaritaan ku haya doorkii uu Ruushku ku lahaa doorashadii Maraykanka ka dhacday 2016kii iyo bal in Trump uu hor istaagay caddaaladda.
Su'aasha ku saabsan in madaxweynuhu uu naftiisa cafiyo ayaa timid ka dib markii wargeyska New York Times uu daabacay waraaq loo diray dacwad oogaha oo ka timid qareenka Trump.
Waraaqdaas ayaana lagu sheegay in madaxweynuhu uu leeyahay awood dhamaystiran oo sharci ah oo uu ku soo af jari karo baaritaannada amaba uu adeegsan karo awoodda uu naftiisa ku cafin karo".
"Awoodahaas ayaana ka dhigan in uusan sina u carqaladaynin caddaaladda, ayay ku doodeen".
Muxuu yiri qareenka Madaxweynuhu?
Isaga oo ka soo muuqday barnaamijka This Week ee ka baxa telefeshinka ABC ayaa la waydiiyay in Trump uu leeyahay awood uu naftiisa ku cafiyi karo.
Image caption Qareenka madaxweynaha Rudy Giuliani
Giuliani oo madax u ah waaxda sharci aqoonka ah ee madaxweynaha ayaa yiri "waxay u badan tahay in uu leeyahay", balse wuxuu ku daray in madaxweynuhu uusan ku talo jirin in uu is cafiyo".
Isaga oo hadalka sii watana wuxuu yiri "Waxay ila tahay saamaynta siyaasadeed ee ka dhallan karta waa mid adag. Cafinta dadka kale waa arrin, cafinta naftaadana waaa arrin kale".
Kevin McCarthy oo ah gudoomiyaha aqlabiyadda ee xildhibannada aqalka wakiillada xisbiga Jamhuuriga oo Axaddii la hadlay telefishinka CNN ayaa sheegay in aysan ahayn in madaxweyne uu is cafiyo.
Muxuu Trump uga baahan yahay is cafinta?
Waxay arrintani salka ku haysaa baaritaanka uu wado Robert Mueller oo ah dacwad ooge khaas ah oo baaritaan ku haya eedaynta ku saabsan in wada shaqayn ay dhex martay kooxda Trump iyo masuuliyiin Ruush ah intii uu socday ol'olihii doorashada ee talada kula wareegay.
Trump ayaa markaste sheega in aysan jirin wax wada shaqayn ah oo uu Ruushka la yeeshay, baaritaanka lagu hayana wuxuu ku tilmaamay "quraafaad".
Qayb ka mid ah baaritaanka Mueller ayaa diiradda lagu saarayaa bal in madaxweynuhu si dambi ah u carqaladeeyay caddaaladda, waxaana si khaas ah loo baarayaa eryitaankiisii lataliyihii hore ee Ammaanka Qaranka Maraykanka Michael Flynn, madixii hore ee FBI-da James Comey iyo falcelinno uu ka sameeyay Xeer Ilaaliyaha Guud Jeff Sessions.
Haddaba malaga yaabaa in uu is cafiyo?
Run ahaantii qofna ma oga. Mana jiro madaxweyne arrintaas isaga uga horreeyay.
Pyongyang oo xilka ka qaadday saraakiil sar sare
Taajir Maraykanka ah oo dhisayay god uu ka galo Niyuukleerka oo la dacweeyay
Marka la fiiriyo kiiskii madaxweynihii hore ee Maraykanka Richard Nixon waaxda caddaaladdu waxay sheegtay in uusan is cafin karin isagu, balse waxaa jira dad kale oo ku doodaya in aysan ahayn arrin mamnuuc ka ah dastuurka Maraykanka.